Alaabaa Kee Dhaabbadhu - OPride.com
Featured • Walaloo
Alaabaa Kee Dhaabbadhu
Dubbiftoota walaloo kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, walaloon yeedalloo
(kiilolee) geerrarsaatiin walaleeffame kun, mee keennaa bara haaraa isiniif haa
tahu! Barri moofaan kun xurii isaa wajjin, roorroo fi miiddhaa isaa wajjin isin
dhiisee haa cala’u! Barri haaraan bakka isaa bu’uuf deemu kun: bara badhaadhinaa fi bara fayyaa, bara gammachuu fi milkii gaarii isinii fi maatii keessanii, lammii fi ollaa keessanii, sabaa fi uummata keessanii bara nagaa fi nageenyaa haa tahu! Hayyee, barri kun bara tokkummaa fi qabsoon Oromoo sonaan jabaatee gara fuulduraatti tarkaanfatu nuuf haa tahu!
Oo yaa joollee
Ee yaa joollee
Maal yaa joollee
Maaloo yaa joollee
Yaa joollee yaa joollee!
Ijoollee biyya abbaa-koo
Ijoollee biyya haadha-too
Yaa jabbilee Kuushiyaa
Gochilloo gurri lootii
Otoo isin jirtanuu
Jarri maakkan nu gootii?
Oliigad nu dhamaaftii
Akka bishaan gabatee
Asiif-achi nu raaaftii
Roorroo nutti cimsitee
Dhiibdee-woo gannu yaaftii
Dhiibdee-woo gannu yaaftii!
Bara Wayyaanee kanaa
Afaan waayyota kanaa
Caala hidhaan hammaatee
Fuunyoon nutti jabaatee
Kan walitti-hidhu miilaa!
Manni hidhaa heddummaatee
Namummaa keenya nyaatee
Inni Shaggarii fi Gibee
Kan Zuwaayi fi Waabee
Inni Habroo fi Dhiddheessaa
Inni Qaallittii keessaa
Waxalee nu madeessaa
Faana fi dirra keessa!
Akka bosonuu baddaa
Adamsanii nu qabuu
Akka dullacha gandaa
Argatanii nu qaluu
Yoom isaanin waltaanee
Akka nafxanyoota durii
Kan homaan beekne furii
Warri abbootii qawwee
Nutti ta’ankaa jawwee!
Qawween biyya seenanii
Qawweessanii nu reebuu
Yoomum isaaniif galaa
Yoomum isaaniif malaa
Kan bilisummaa dheebuu!
Akkuma bara hongee
Akkuma bara gonkee
Kanatoo akkan nu raasaa
Gaaraa-dakaa nu kaasa!
Hidhannee manaa baanaa
Waanjoo ofirraa haanaa
Namasa guutuus taana!
Biyyi gabaa baafamee
Akka hoolaa gayyaafamee
Saamtuun saanii hanqattee
Gaadduun saaniis hanqattee
Lafa lafee Oromoo
Lafa madda Oromoo
Awwaala abbaa wajjinii
Awwaala haadhaa waliinii
Kanaaf, Sululti olka’ee
Onnee Taaddoo qabatee
Dhaamsa Waaqoo abdatee
Dhaamsatoo dhaamsa qabaa
Dhaamsa jagnoota biyyaa
Dhaamsa gamnoota biyyaa
An kanaafan gadoodaa
Dhagayi iyya kiyyaa
Yaa xiqqaa-guddaa biyyaa!
Waljalaa qabii iyyi
Sagalee olqabii iyyi
Iyyii iyya dabarsii
Yeeyyii si nyaattu marsii
Marsiitii biyyaa baasi
Manneen hidhaa caccabsii
Caccabsii keessaa bayii
Nama tayii dhaabaddhu
Kan gabrummaa buqqisii
Barliin, 28. 12. 2010
* Dubbiftoota walaloo kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, walaloon yeedalloo
****************** // ****************
oromo oromo poem tamana bitima walaloo
Eebba Oromoo – Prayer
Otoon Waaqa Ta’ee
Marriage Practices Among Gidda Oromo
Qalamnii kee yoomuu haa margisuu
surrin sammuu kee huggu haa lalistuu!